Kuzolulekwa abantu ngokubaluleka kokonga eMgungundlovu | Eyethu News
Merkel in final push for coalition to avert crisis - 42 mins ago
Kuzolulekwa abantu ngokubaluleka kokonga eMgungundlovu
“Sihlose ukuhlomisa umphakathi wonkana. “
Esithombeni nguNksz Thembi Chiliza ongumqondisi jikelele we-KZN Financial Literacy Association Trust. Isithombe uNtombizethu Ngcobo
Nakuba isimo somnotho sibucayi kodwa lokho akusho ukuthi abantu kumele babe budedengu ngokuphathwa kwezimali. Lena kuzobe kungenye yezingqikithi zomhlangano ozoba seCity Hall ngoLwesine oluzayo (25 Meyi) okuhloswe ngawo ukubalula isidingo sokonga. Lomhlangano wosuku olulodwa uzobe usingethwe iKZN Financial Literacy Association Trust okuyinhlangano engenzi nzuzo.
Ngokusho kuka Nksz. Babalwa Luphondo walenhlangano, sekukaningi kubonakala ukuthi kunesidingo sokufundisa ngokubaluleka kanye nezindlela zokonga imali. “Sihlose ukuhlomisa umphakathi wonkana ngezindlela ongazisebenzisa ukuze ube sesimweni esingcono sezimali,” kuchaza yena.
Funda olunye udaba : Kuklonyeliswe abafundi abenza kahle eSobantu High School
Uqhube wathi babheke nokusiza osomabhizinisi abafufusayo, ngoba kuba nzima kubona ukuthola ukwalulekewa okwanele njengoba bezibambele amabhizinisi isikhathi siningi. Kulomhlangano kuzoba nezikhulumi ezahlukene okubalwa kuzo iNhloko yoMnyango wezeZimali KwaZulu-Natali uMnuz Simiso Magagagula, umqondisi jikele Nksz. Thembi Chiliza kanye nemeya kaMasipala woMsunduzi. Noma ubani wamukelekile ukuthi abe yingxenye, kepha ngenxa yobuncane bendawo bekucelwa abantu baqinisekise ukuba khona kwabo ngokushayela kulenombolo- 033- 264 4940.
Kukhanyiselwe imbokodo engosomabhizinisi eMgungundlovu